9 IT Courses Tokony hanao mpianatra ny mpianatra rehefa vita ny fanadinan'ny Birao 12th - ITS
IT Courses & Certification taorian'ny fanadinana 12th
1. Fampidirana amin'ny Java
5. Virtual Realality
9. Ny tena zava-misy
Ny CBSE XII dia nivoaka ny mpianatra, maro ireo mpianatra dia hanaitra ny fankasitrahana fa fotoana tena tsara hisafidianana làlana iray. Ny fianarana IT dia manolotra fahafahana mahafinaritra rehefa tadiavina izy ireo ary afaka mamela ny olona hiantsoana am-pahavitrihana ao anatin'ny korontana dizitaly izay mbola miorim-paka. Ireto misy sanda sarobidy sasany azon'ireo mpianatra ho an'ny mpianatra mpianatra.
Anarana anarana: SCJA OCP Java SE 7 Fandaharam-pianarana Training and Certification
Ity fampianarana ity dia manome fianarana fampivoarana ny fampiharana amin'ny mpianatra. Ity dia dingana mampitolagaga mba hamoronana fandaharana amin'ny programa Java ary hahafantatra ireo hevi-dahatsoratra toy ny fifandonana, fialana ary lova.
Benefits - Amin'ny fahafahana mivoatra amin'ny Java, mety ho lasa mpandrindra Java ianao. Ankoatr'izay dia afaka mameno ny tetikasa na ny talen'ny fandaharam-pampianarana miaraka amin'ny asa izay ahafahan'ny fampahalalam-baovao ambony amin'ny Java ahafahanao mamolavola fomba mahomby mandritra ny fizotran'ny dingana.
Anarana anarana: 10266A: Fampiofanana fototra Essentials C #
Ity lalàm-panoratana ity dia ahitana ny rafitry ny programa C système C sy ny fampiharana ary ny fiteny. Ireo mpandrindra afovoan-dàlana midadasika dia mandray ny fianarana sy ny fahaiza-manao ilaina amin'ny famolavolana C # applications. Ny fianarana dia mirakitra lohahevitra toy ny .NET Framework, fampiasana studio studio sy C # mba hamoronana rindrambaiko .NET Framework.
Benefits - Ny orinasa iray ao C # dia hanomana anao ho lasa injenieran'ny rafitra sy ny mpandrindra ny Desktop.
Anarana anarana:CompTIA Linux +
Mampirisika anao hahazo loka telo ny Linux + kou - CompTIA Linux +, LPIC-1, ary Novell Certified Linux Administrator. Ny lohahevitra voarakitra an-dalana dia manome hery anao hahatakatra ny hevitr'ireo Linux Products, Debian, ary Ubuntu.
Benefits - Raha vantany vao vita ity dingana ity dia hanana fahafahana hanara-maso ny solosaina ianao, manamboatra fidirana mivantana, manamboatra fitakiana, mamokatra antonta rakitsoratra ary manao hetsika hafa mifandraika amin'ny fianarana Linux. Ho lasa fahaizana voavono ianao miaraka amin'ny fepetra mety hitranga amin'ny fitifirana mafy amin'ity sehatra goavana ity ao amin'ny orinasa rindrambaiko.
Anarana anarana: CompTIA Cloud Essentials
Ireo mpianatra izay mivoaka ny valin'ny kilasy faha-12 dia afaka manao ity dingana ity izay hampihatra azy ireo amin'ny foto-kevitra momba ny rahona.
Benefits - Satria ny mpianatra dia mahazo ny fahatakarana an-tampon'ny tetikady ho an'ny fitantanana rahona. Izy ireo dia hanangona fampahalalana momba ny mombamomba ny singa atao amin'ny rahona avy amin'ny lafiny ara-teknika sy ara-barotra, izay misy fepetra hentitra ho an'ny sehatra IT sy tsy IT.
Mianara anaye: Ny tena zava-misy marina amin'ny Engine Engine, ny Google Cardboard, ary ny Oculus Rift
Ny fiofanana dia manome fanofanana momba ny Unity3D engine mba hamoronana toe-javatra virtoaly ho an'ny Oculus Rift sy Google Cardboard.
Benefits - Hanorina orinasa matanjaka momba ny teknolojian'ny zava-misy virtoaly sy ny fampiharana maoderina. Ny tena tsara indrindra ho an'ny mpamorona lalao fifaninanana, ity fampianarana ity dia marika amin'ny ankamaroan'ny fitadiavam-panahin'ny mpianatra.
Anarana anarana: CompTia Server +
Ity laha-dingana ity dia mirakitra lohahevitra toy ny rindrambaiko, solosaina, fitehirizana, fanarenana an-tsokosoko, fomba fanao tsara indrindra amin'ny toe-pahasalaman'ny IT sy ny fitsaboana. Ao anatin'izany dingana izany, afaka mamotopototra ny fitehirizana ny serivisy miaraka amin'ireo hevitra momba ny famerenana amin'ny loza voajanahary ianao.
Benefits - Ankoatra ny tanjon'ity sehatra ity dia mpivarotra tsy ara-dalàna izy ary mahazo fahaiza-manao momba ny aterineto sy ny teknolojia manokana. Mety ho lasa fahaiza-mampiasa IT ianao amin'ny fametrahana, ny fitazonana sy ny fitsabahana amin'ny tambajotra ao an-toerana.
Anarana anarana: CompTIA Security + Training Certification
Ity fampiarahan'ny IT / Computer taorian'ny twelfth dia manome fahafahana anao hampihatra ny fianarana ny filaminana avy amin'ny data ho an'ny tambajotra tena izy. Hanorina sehatra goavana eo amin'ny sehatry ny fiarovana ara-pahalalana toy ny fitantanana ny fahaleovantena, ny fampihenana ny hazavana sy ny fitantanana ny loza, ny kriptografia, ny fotodrafitrasa fiarovana, ny fidirana amin'ny fidirana amin'ny tambajotra ary ny maro hafa.
Benefits - Mahaiza manokana ho lasa manam-pahaizana momba ny fiarovana, mpanolo-tsaina momba ny fiarovana na injeniera fiarovana. Raha mitombo ny heloka bevava cyber mba hitsangana, asa an-tserasera security dia mety ho safidy manokana ny karama.
Anarana anarana: CompTIA N +
Ny fianarana dia manome fampiofanana fototra amin'ny fametrahana, ny fametrahana, ny fitazonana, ny fikarakarana ary ny fitsaboana ny fotodrafitrasa ao amin'ny tambazotra.
Benefits - Hikirakira ny fahaiza-manavaka ny toetra amam-pitaovan'ny tamba-jotra, ny ampahany amin'ny fampiharana LAN sy WAN, olana amin'ny fiarovana ny tambajotra sns. Tsy misy orinasa miasa amin'izao fotoana izao raha tsy misy mpiandraikitra ny tambajotra, manampy amin'ny lazan'io dingana io sy ny fahatonian'ny matihanina any aoriana. .
Anarana anarana: Miova tanteraka (AR sy VR) miaraka amin'ny Unity 3D sy Microsoft HoloLens
Ny fanaovana ity dingana ity dia manome vintana hampifangaroana ny tena zava-misy marina sy ny tena zava-misy marina amin'ny alalan'ny HoloLens ary mandinika ny fiasan'ny asa momba ny tontolo virtoaly. Mampahafantatra anao ny sehatra HoloLens sy ny fomba tsara kokoa hifandraisana amin'ny ordinatera.
Benefits - Rehefa mianatra sy mampahafantatra ny fanaraha-maso ny môtô sy ny sarintany ara-tontolo iainana ianao, dia mamelà ny hafalianao amin'ny fahalalana sy ny fikarakarana ny zava-misy virtoaly ary hanitatra ny zava-misy ary hanova azy ho lasa asa mahomby.
Ao anatin'ireo fakana ambaratonga, aoka ho toy ny nahalalanao ny fanatanterahana ny teti-bidin'ny teti-bolan'ny 12 tapitrisa, azonao atao ny mahatsapa fifaliana fa tsy misy ny tsy fisian'ny safidy momba ny asa aorian'ny fanadinana an-tsekoly faharoa. Ho setrin'ny tombontsoa sy ny tanjona, ny mpianatra dia afaka misafidy ny iray amin'ireo dingana voasoratra etsy ambony mba hanorenana ny fototry ny fampahalalam-baovao sy ny tsikombakomba ary hiantoka ny asany mahomby amin'ny manaraka.